Sukuyifaka i-imeyile kwiBack Burner! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 18, 2011 Itempile yaseLavon
Ekugqibeleni Iposti yeendwendwe zeDelivra KwiMartech, uNeil ubandakanye uphando olukubuza yonke into ukuba yeyiphi eminye yemiqobo ephambili ojamelene nayo ngeenkqubo zakho ze-imeyile. Omnye wabo yayingu ukungabikho kwexesha ukufezekisa oko kwakufunwa. Ndiyakuqonda ngokupheleleyo ukucinezelwa ixesha; kubonakala kungabikho iiyure ezaneleyo ngemini!
Nangona kunjalo, ndiyakubongoza ukuba wenze inkqubo yakho ye-imeyile a phambili. Ukuba awukayiqalisi inkqubo ye-imeyile, lixesha elidlulileyo ukuqala. Ukuba uyiqalisile inkqubo, kodwa ngokungakhathali uyityeshele, ndiyakukhuthaza ukuba wenze ixesha lokuvavanya kwaye ubone ukuba yeyiphi imimandla efuna ukuhoywa kwangoko. Sukubeka inkqubo yakho ye-imeyile kwifayile ye- isitya sangasemva!
Vavanya kwakhona iqhinga lakho lokuthengisa nge-imeyile
Coca uluhlu kwaye ususe iidilesi ezimbi
Yakha entsha kunye nomxholo ophuculweyo
Gqiba ikopi egxile ekubandakanyeni abaphulaphuli bakho kwaye ibakhuthaze ukuba benze
Ukuthatha ixesha lokugxila kwinkqubo yakho yokuthengisa nge-imeyile kunokuba ngumahluko ekufikeleleni kubaphulaphuli abaninzi, ukuphinda ubandakanye abaphulaphuli bakho bangoku, kunye nokwenza i-ROI enkulu. Ngokuza koNyaka oMtsha, eli lelona xesha lilungileyo lokuthatha inkqubo yakho yokuthengisa nge-imeyile kwisikhuseli sangasemva kwaye uyenze iphambili!
tags: delivraDelivra ukuthengisa nge-imeyileIsicwangciso seminyaka esitsha se-imeyileIzicwangciso ze-imeyile
Nxibelelana nokunyuka kwamaphepha ngotyelelo nge-9.6%.
Novemba 18, 2011 ngo-1: 06 PM
Iposti emnandi, @lavon_temple: disqus! Ndingatsho, ngokobuqu, ukuba i-imeyile inefuthe ELIKHULU ekukhuleni kwethu kwiBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso. Ukuba bendiyazile ifuthe, ngendiyenze ukuba ibe yinto ebaluleke kakhulu kwiminyaka eyadlulayo.